Antoine Griezmann oo ku wargaliyay Barcelona kooxda uu doonayo inuu u dhaqaaqo – Gool FM - Idman news
(Barcelona) 24 Luulyo 2021. Wargeyska “Sport” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Antoine Griezmann uusan dooneynin inuu ka tago Barcelona ilaa uu u dhaqaaqo kooxdiisii ​​hore ee Atletico Madrid, isagoo diiday dhamaan xulashooyinka kale ee suuqa yaala.
Barcelona ayaa dooneysa inay iibiso Antoine Griezmann si loo yareeyo mushaharka ciyaartoyda, isla markaana loo xakameeyo miisaaniyada kooxda, Madaxweynaha Joan Laporta ayaa qirtay inay macquul tahay in la iibiyo weeraryahanka reer France hadii ay ku helaan dalab dhaqaale oo soo jiidasho leh.
Dhinaca kale warar ayaa sheegaya in Atletico Madrid ay wadahadalo la gashay kooxda Barcelona si ay u soo afjarto heshiis ay isku dhaafsanayaan xiddigaha Saúl Ñíguez iyo Antoine Griezmann, kaasoo ugu dambeyntii ay diiday kooxda reer Catalonia, oo dooneysa in ciyaaryahanka reer France ay ku hesho dhaqaale.
Wargeyska ayaa sidoo kale tilmaamay in Griezmann uu maamulka Barcelona u sheegay inuu ka tagayo kooxda hadii uu ku laabanayo Atletico Madrid oo kaliya, isaga oo iska diiday u dhaqaaqista kooxo ay ka mid yihiin Tottenham ama Manchester City.
Previous Inuu Shumac shidan jiray, inuu sariir la’aan ahaa yaraantiisii, shaqadii adkayd ee uu qaban jiray Aabihiis, Gurigiisa qasriga ah & Lacagaha Malaayiinta dollar ah ee uu Neymar Jr ku iibsaday Diyaarad Helicopter ah!
Next “Haaland wuu ka fog yahay heerka Mbappé” – Xiddig hore kooxda Borussia Dortmund ah – Gool FM
32 seconds ago Mohamoud